Ikhaya - I AM Yemen
amakhaya acekelwe phansi
izinkulungwane zabantu abafudukayo
Road, ulwandle, esibhakabhakeni
Indlala nezifo izigidi
Ukuntula ukudla nemithi
abazihlelele Wounded futhi wabulala
Isifinyezo impi Yemen
Ngo 2015 futhi ngemva Yemen sika umengameli ukwesula futhi aphunyuke kusukela Yemen, impi ukungalingani ngokumelene Yemen owabuzwa ngu Saudi Arabia kanye United Arab Emirates. ohulumeni European futhi American okubangelwa obuhlasimulisayo ngokumelene ukuzilwela abantu Yemeni ezinkulungwane ezingane kwafa amasosha nezakhamuzi lapho, ngokuthengisa izikhali nasekusekeleni Saudi Arabia esikhundleni ekuvimbeleni futhi ngumlamuli ngalolu daba. Lezi macala hhayi kuphela kungagcini ukuhlaselwa kwezempi kodwa Saudi Arabia azungeza umhlaba, emoyeni, futhi ulwandle e Yemen ukuze zivale umnyango ukudla nezidakamizwa ukuze izwe okuyinto yayibeka engozini ukuphila kwezigidi zabantu. Ngokusho kwemibiko evela izinhlangano zamazwe ngamazwe, la amacala baye baba inhlekelele embi kunazo zonke zosizo mashumi eminyaka ambalwa okugcina futhi wabangela indlala futhi waqala izifo ezifana nekholera.
Nge ukukhululwa izindaba nezithombe zalezi amacala kule website, uye wazama ukwazisa ngalezi ubugebengu okuyinto kwakulandelwa bazoyiduba Saudi-wasekela izindaba ejensi, ukuqeda le mpi ukungalingani ngu imibhikisho ezivela emhlabeni wonke.
Sicela ufake ikheli lakho ukuze ngizigcine nginolwazi oluhle ngezinto izindaba zakamuva futhi ukusekela abantu Yemeni
I-UN isigxekile isiteleka sase-Yemen esibulale izingane ezifinyelela kweziyisishiyagalolunye I-UN isigxekile isiteleka sase-Yemen esibulale izingane ezifinyelela kweziyisishiyagalolunye
Ingane esibhedlela ngemuva kokulimala esigamekweni sezindiza esifundazweni esisenyakatho neJawf, Yemen, ngoJulayi, 2020. Zilinganiselwa kwayisishiyagalolunye izingane ezishonile kulandela ukuhlasela kwezindiza enyakatho yeYemen's Jawf Province ngoLwesine..
I-Yemen Ibona Ukubuyela Emazingeni Athusayo Wokungavikeleki Kokudla: I-UNICEF, I-WFP, I-FAO
Impi eholwa yiSaudi, izikhukhula, izinkumbi zasogwadule, futhi manje i-COVID-19 idala isivunguvungu esihle esingahlehlisa izinzuzo zokuvikeleka kokudla okuzuzwe kanzima eYemen, uxwayise i-Integrated Food Security Phase Classification yakamuva...
Saudi, I-UAE Yasebenzisa Amabhomu Eqoqo e-Yemen's Hudaydah: Isikhulu se-UN
I-Saudi Arabia kanye ne-United Arab Emirates (I-UAE), amalungu abalulekile omfelandawonye alwa neYemen, bafake amabhomu eqembu endaweni yokuhlala esifundazweni esisogwini olusentshonalanga yezwe...
A: I-Yemen onqenqemeni ‘lwendlala embi kakhulu emhlabeni 100 iminyaka'
Juni 11, 2020 37217 0 2
I-United Nations ixwayise iYemen ukuthi kungenzeka ibhekane nendlala embi kakhulu kuyo 100 iminyaka uma ukuhlasela kwezindiza komfelandawonye oholwa yiSaudi kungamiswa, I-Guardian ibike ngoMsombuluko. Uma impi iqhubeka, indlala ingasiqeda nya...
Ingabe indawo abantu ukuze usize abantu Yemeni ngokumelene ubugebengu Saudi Arabia futhi uqede unyaka eziningi-yayo ekuvinjezelweni okuchazwa kuye kwabulala izigidi
IAMYEMEN.COM © 2022 Wonke Amalungelo Agodliwe.